Baarlamaanka KGS oo cod aqlabiyad leh ku Ansixiyay Golaha Wasiirada Maamulkaasi – Kalfadhi
Baarlamaanka KGS oo cod aqlabiyad leh ku Ansixiyay Golaha Wasiirada Maamulkaasi
Kalfadhiga 7aad kulankiisa 2aad ee Baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta waxaa soo xaadiray 124 Xildhibaan waxa uuna Ajandaha kulanka maanta ahaa Ansixinta Golaha Wasiirada ee Madaxweyne Lafta-Gareen. Cabdicasiis Xasan Maxamed Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo hadal u jeediyay Xildhibaanada ka hor Ansixinta Wasiirada ayaa Xildhibaanada ka dalbaday in Codka Kalsoonida ah ay siiyaan Xukuumadda.
“Baarlamaanka Sharafta leh waxaan idinka codsanayaa in aad codkiinna siisaan Xukuumadayda, si aan waxa uga qabano dhibaatooyinka ay wajahayaan Shacabka KG”, ayuu yiri Madaxweyne Lafta-gareen. “Marka ugu horeyso sidii aan Barnaamijkayga ku sheegay in waxaan xooga saari doonaa amaanka waddada Xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye iyo in aan go’doonka ka saarna Shacabka Bakool”, ayuu yiri Cabdicasiis Xasan Maxamed Madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Shacabka Koonfur Galbeed waxay dhib ku qabaan Al-shabaab, waxaan degaanka ka saari doonaa Al-shabaab iyo Kooxaha kale jid-gooyada dhigta” ayuu yiri Lafta-Gareen. “Dib u heshiin, horumarin iyo shaqo abuur ayaa sidoo kale qayb ka ah qorshahayna hadii aad Kalsoonidiina nasiisaan”, ayaa kamid ah hadaladii uu jeediyay Cabdicasiis Xasan Maxamed.
Baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa hadalka Madaxweynaha kadib waxay codka Kalsoonida ah siiyeen Wasiirada cusub oo gaaraya 50 Xubnood. 123 Xildhibaan ayaa u codeysay waxaana kulanka ku sugnaa 124 Xildhibaan sida uu ku dhawaaqay Guddoomiyaha Baarlamaanka Koonfur Galbeed Shariif Sheekhuna Maye.
“Xukuumadda maanta la ansixiyay waxaan uga baahanay wax qabad dhab ah, waxaan kula xisaabtami doonaa shaqada oo ay ugu horreyso ammaanka” ayuu yiri Guddoomiyaha Baarlamaanka Koonfur Galbeed markii la ansixiyay Xukuumadda Koonfur Galbeed.
Wasiirada maanta la ansixiyay ee Maamulka KGS waxaa horyaala caqabado badan oo ay ugu horreyso wax kaqabada ammaanka, Xal u helidda dagaal beeleedyada Sh/Hoose, furitaanka degmooyinka ay go’doomiyeen Al-shabaab iyo sidii shaqo loogu abuuri lahaa dadka ku nool 3da ee Gobal ee Maamulka Koonfur Galbeed oo la aaminsan yahay in ay u baahan-yihiin horumarin iyo Mashaariic badan.
Gabar uu dhalay Madaxweyne Erdoğan oo Tababar u qabatay Xildhibaanada Haweenka ee BFS
Xisaabiyaha guud ee Puntland oo shirkadaha daabacadda u jeediyay in aysan samayn karin dikumeentiyada lacagta ee dowladda